Tamang Samaj|Tamang|Tamang News|Portal – बलिदेखि सतिसम्म
Oct 19, 2016 admin Articles, History, Local News
१. विषय उठान
नेपाली समाजमा बलिप्रथा रहेको छ । त्यसैको बारेमा व्यापक बहस भइरहेकै छ । पक्ष र विपक्षमा उभिनेको सङ्ख्या उत्तिकै छन् । यद्यपि बलिको विरोध गरेपछि सर्वथोक सम्पन्न गरेँ भन्ने भाव बोक्ने पनि छन् । यसलाई छोड्न नसकेका कारण हीनभवना पाल्नेहरू पनि छन् । कोही चाहिँ बलि दिनु ठिक हो भन्छन् । कोही भने अमानवीय ठान्छन् । कोही न त पक्ष न त विपक्ष; अन्यौलतामा रुमलिएका छन् । यस प्रथाको शुरू गर्ने व्यक्ति वा समूहको नाम कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले कोही कोही भने बलिप्रथा शुरू गर्नेको नाम सोधेरै ठिक पार्छु भन्ने ताकमा देखिन्छन् । कोही चाहिँ बलि दिएन भने मासु खान नपाइएला कि भन्ने चिन्तामा डुबेजस्तै देखिन्छन् । कोही चाहिँ टन्न मासु खाँदै बाहिर भने बलिप्रथाको घोर विरोध गरिरहेका छन् ।
विशेषतः चाडपर्व वा कुनै मेलाको बेलामा बलिको बारेमा खुब चर्चा हुन्छ । केही वर्षअघि तपस्वी रामबहादुर बोम्जन पनि यस विवादमा तानिएका थिए । उनले कुनै पनि हालतमा गढीमाई मेलामा हुने पशुपङ्क्षी बलि रोक्ने घोषणा गरे भन्ने हल्ला चलाएका थिए । बौद्ध धर्मावलम्बीको एक समूह भने बोम्जनको पक्षमा खरो उत्रिएको थियो । वर्षौंदेखि बलि दिँदै आएका भन्नेहरू चाहिन् कसरी रोक्तो रहेछ हेरौंला भन्दै तात्तिएका थिए । द्वन्द्व हुनेछ भन्ने सम्मको हल्ला चलेको थियो । अन्ततः रामबहादुर बोम्जन केही समयको लागि भूमिगतजस्तै भएका थिए । बलि रोकिएन । बलि रोक्ने भनेर पुगेको समितिका सदस्यहरू त्यत्तिकै फर्केका थिए । विदेशी सेलिब्रेटीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई चिट्ठी लेखेको कुरा आएको थियो । यसले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेसम्मको अनुमान गरेको थियो ।
बलि भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा प्रायः सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यसको परिभाषा लगाउनुपर्ने हुँदा चाहिँ हल्का हच्किन्छौं । विपक्षमा बोल्न पाए मच्चिन्छौं । पक्षमा बोल्नुपर्ने हुँदा केही थच्चिन्छौं । थाहा छैन; हामी साँच्चैमा कहिले सच्चिन्छौं ? तथापि, बलिको प्रशस्त अर्थ लगाइएका पाइन्छन् । कोही बलि भन्नाले पशुपङ्क्षीलाई कुनै शक्तिका नाममा भोग वा हत्या गर्नु हो भन्छन् । शक्तिलाई खुशी गराउनका निमित्त प्राणीको रगत चढाउनु हो भन्छन् । कोही भने, बलिको अर्थ- आफूमा भएका कमजोरीहरूलाई समाप्त गर्नु वा छोड्ने प्रण गर्नु हो भन्छन् । कसैका लागि बलि चढाएपछि सोचेको पूरा हुन्छ । कसैका लागि शक्ति प्राप्त हुन्छ । कसैका लागि दूर्भाग्य शुरू हुन्छ । कोही शास्त्रसम्मत् भन्छन् । कोही हत्यारा ठान्छन् ।
प्रचलित नेपाली भनिएको भाषामा बलि शब्दको व्यापक प्रयोग पाइन्छन् । ‘बल्+इन्’ जोडेर ‘बलि’ भएको कुरा लेखन/सम्पादन टीकादत्त बराल रहेको ‘तत्सम नेपाली व्युत्पत्ति शब्दकोश’मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त शब्दकोशमा ”बलि : (ना./पुं.) बल्यते दीयते इति… भनिएको छ । बलिलाई सामान्य बोलिचालीमा ‘भोग’ शब्दको प्रयोग पनि गरिएको पाइन्छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा भने ‘भोग’को धेरै अर्थ उल्लेख गरिएका छन् । सातौं नं.मा उल्लेख गरिएको अर्थ अनुसार, ”देव-देवी आदिलाई अर्पण गरिने नैवेद्य, बलि आदि ।” नै भोग हो भनिएको पाइन्छ । भोगबलिसँग ‘नैवेद्य’ वा ‘नैवेद’ शब्द पनि जोडिएर आउने गरेको छ । उक्त शब्दकोशमा हेर्ने हो भने, ”देवतालाई अर्पिएको खाद्य वस्तु; भगवानलाई भोग लगाइएको खाद्य पदार्थ; नैवेद्य” भनिएको पाइन्छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने, नैवेद भन्नाले शाकाहारी वा मांसाहारी भोजनका परिकार; जुन बलिदिने वा अर्पण गरिन्छ हो ।
तामाङ बोम्बोमा हेर्ने हो भने, बलि चढाइएका पङ्क्षीको कलेजो तथा पाठापाठीका मुटु, कलेजो, फियो, फोक्सो, मिर्गौला र बोसेआन्द्रा लगायतलाई पोलेर चढाउन तयार पारिएका हुन्छन्; त्यसैलाई नैवेद भन्ने गर्दछन् । यद्यपि ‘नैवेद’ शब्द तामाङको आफ्नै भाषा होइन भन्ने देखिन्छ । त्यसो त ‘बलि’ वा ‘भोग’को पनि तामाङ शब्द पाइएको छैन । सामान्य बोलिचालीमा, ‘भोग’, ‘पुजू’ (पूजा) र ‘थाsबा’ जस्ता शब्दको प्रयोग गर्दछन् । यिनमा भोग र पुजू नेपाली भाषाबाट लिएको शब्द हो । पछिल्लो ‘थाsबा’ मात्रै तामाङ हो । त्यसको अर्थ काटेको भन्ने हुन्छ । बलि दिएरै वा नदिएरै पनि काटिने हुनाले ‘थाsबा’ भन्दाखेरि बलि भन्ने अर्थ खुल्दैन । सांस्कृतिक रूपमा लस्होबा, मङ ख्लाsबा, दिमक्योन्बा, खड्कु थाsबा, ह्युल्जे लबा, गोडे (गोठ) पूजु साथै स्हुङ (खेप्पास्हुङ, ह्वरीस्हुङ र झ्योहोस्हुङ) आदि भन्ने गरिन्छन् । उल्लेखित सांस्कृतिक कृत्यको क्रममा बलि दिने प्रचलन पाइन्छन् । तथापि बलिलाई भन्दा पनि पूजा विशेषलाई जोड दिन्छन् । यसप्रकार बलिलाई खास प्राथमिकता दिँदैनन् । त्यसैले बलि त पूजाको क्रममा जोडिएर आउने एउटा पाटो मात्रै भन्ने बुझिन्छ ।
तामाङमा नभएपनि नेपाली ‘बलि’लाई अङ्ग्रेजीमा sacrifice शब्दको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । अक्साफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरीमा उल्लेख गरिए अनुसार n. 1 ~ (to sb) (a) [U] offering of sth valuable, oftenaslaughtered animal, toagod : the sacrifice of an ox to Jupiter. (b) [C] such an offering; thing offered in this way: killasheep asasacrifice.2(a) [U]giving up of sth, usu in return for sth more important or valuable: Getting rich isn’t worth the sacrifice of your principles भनिएको पाइन्छ । यसप्रकार देउताका नाममा वा खुशी पार्न कुनै प्राणीको हत्या गरी रगत चढाउनु वा कसैका लागि वा केही प्राप्तिका खातिर आफ्नो सिद्धान्तलाई नै छोड्नु वा त्याग्नु समेतलाई sacrifice भनिएको पाइन्छ ।
यस्तैगरी म्याकमिलानको डिक्सनरी अभ एन्थ्रोपोलोजीमा पनि बलिको बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उक्त शब्दकोशमा sacrifice. The offering ofaliving animal – or in exceptional cases,ahuman being -toadeity or spirit. The anthropological study of sacrifice has focused on one hand on the symbolic statements which are made about human, aimal and spiritual identity and relationships, and on the other on the manner in which sacrifice may be interpreted as reflecting and reinforcing certain aspects of social structure and social solidarity भनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यहाँ नर बलिको समेत प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।
नेपाली बृहत् शब्दकोशमा भने यस्तो उल्लेख गरिएको छ, ‘बलि – ना. (सं.) १. देवदेवतालाई अर्पिने भोग्य वस्तु; नैवेद्य । २. देवतालाई भोग दिइने पशुपन्छी । ३. भोजन गर्नुभन्दा पहिले देवपितृका उद्देश्यले चढाइने अन्न; औसानी । ४. पूजा, होम आदिमा क्षेत्रपाललाई चढाइने अन्न । ५. पञ्च-महायक्षमध्ये एक भूतयज्ञ । ६. भूमिकर; मालपोत । ७. पेटको लुँदाका बीचको रेखा । ८. पुराणप्रसिद्ध दानी दैत्य राजा । – दान – ना. १. देव-देवताका नाममा गरिने पशुपन्छीको बध; पशुबलि दिने काम । २. लोकहित वा राष्ट्रहितका निम्ति गरिने उत्सर्ग; त्याग ।’ यस परिभाषालाई हेरेपछि एकपटक दिमागभित्र तिरिमिरीझ्याइँ भएमा कुनै अनौठो मानिरहनु पर्दैन । यी सबै अर्थहरू बुझ्न चाहने हो भने सम्बन्धित विषयका ज्ञाता तथा ग्रन्थहरू नै खोज्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यद्यपि यस परिभाषाले बलि भन्नाले देव-देउतालाई अर्पण गर्ने नैवेद्य (खाद्य समेत), पशुपङ्क्षी, अन्न, भूतयज्ञ, तिरिने कर वा शुल्क, छालामा परेका रेखा वा चाउरीपन र व्यक्तिका नाम समेतलाई जनाएको छ । त्यस्तैगरी अर्पण गर्न गराउन वा चढाउन मिल्दोरहेछ । बलिमै दान जोडेर बलिदान दिन सकिने रहेछ । त्यसको अर्थ देउतालाई पशुको प्राण वा रगत दान गर्न तथा देशको नाममा आफ्ना सेना प्रहरी आदि वा सेना प्रहरी आदिले लडार्इँको नाममा आफ्नै प्राण समाप्त पार्नु वा चढाउनु वा उत्सर्ग गर्नु पनि बलिमै पर्दोरहेछ । खै कसरी कसरी, देश र जनताको निम्ति वा नाममा उच्च पदमा आसिन साथै ठूला नेता/नेतृ साथै मन्त्री एवं राष्ट्रपमुखले देशको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यहोरा चाहिँ उल्लेख गर्न बिर्सेछन् जस्तो लागिरहेको छ ।
नेपाली बृहत् शब्दकोशमै ”कुलायन वा देव-देवतालाई बलि दिने चलन; देव-देवताका नाममा पशुवध गरिने परम्परा ।” भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यसप्रकार कुनै पनि पशुपङ्क्षीका हत्या गरेर, तिनका रगत देउ-देउतालाई चढाउनु नै बलि रहेछ । त्यस्ता अमूक पशुपङ्क्षीमा राँगा, बोका (पाठापाठीसमेत), कुखुरा, हाँस र परेवा आदि पर्दछन् । कतिपय अवस्थामा नरबलिको कुरा पनि आउने गर्दछन् अर्थात पहिले-पहिले मानिस नै मारेर बलि दिने प्रचलन रहेछ । अहिले पनि त्यसको अवशेष पाइएको बताइन्छन् । बलि दिने क्रममा- तोर्मा, नरिवल र फलफूलको समेत प्रयोग गरेका देख्न सक्छौं । फूल तथा पाती चढाउनुलाई पनि कसैले एक किसिमको बलि नै हो भनेर भन्न सक्छन् । यदि कसैले त्यस्तै दावी गरेछन् भने पनि विवाद गरिरहनु पर्दैन किनकी फूल र पाती पनि जीवित हुन्छन् । चढाउने नाममा तिनलाई हाँगोबाट निमोठ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि एक किसिमको हत्या नै हो । सामान्य अर्थमा कुनै पनि देउ-देउता (देवीसमेत)लाई खुशी पारेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न गराउनका निमित्त कुनै पनि जीवित प्राणीको हत्या गरी त्यसको रगत चढाउनु नै बलि रहेछ । त्यसो त खाद्य पदार्थ तथा फलफूलको प्रयोग पनि एक किसिमले बलि नै रहेछ । कतिपय अवस्थामा भने आफू वा कुनै एकमाथि आइपरेको समस्याबाट उम्कनका निमित्त सट्टामा बलि दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।
३. बलिसँग जोडिएको मान्यता वा दर्शन
बलिसँग जोडिएको मान्यता वा दर्शन के छ भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । माथि उल्लेखित परिभाषाले पनि बलिको केही हदसम्म मान्यता वा दर्शनलाई उजागर गरिसकेको छ । कुनै पनि देवी, देउता वा शक्तिहरूलाई खुशी पार्न बलिप्रथाको विकास गरिएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस प्रथाको शुरूवात कहिलेदेखि भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट छैन । तथापि आत्मा, भूतप्रेत तथा देवी देउताको अवधारणासँगै यसको विकास भएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । शुरूमा जब भूतप्रेतका कारण मानिस बिमारी परेको भन्ने बुझे; तब बलिको अवधारणा बनेको हुनुपर्दछ । त्यसो त भूतप्रेतकै कारण मानिस बिमारी परेको भन्ने अवधारणा बनेको थियो । त्यस्ता शक्तिले मानिसलाई पिर्ने साथै कतिले ज्यानै लिनेसम्मको विश्वास गरेका देखिन्छन् ।
त्यसप्रकार पिराहशक्तिबाट मुक्तिका लागि अन्य विशेषतः पशुपङ्क्षीका बलि दिने प्रचलन चलेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ज्यानै लिने खालका भनिएका भूतप्रेत लागेमा पनि मन्साउने, झारफूक गर्ने गर्दथे । त्यसरी नभएपछि बिमारीको सट्टामा पशुपङ्क्षी दिन थाले । सोहीक्रममा बिस्तारै पिराहशक्तिबाट बच्नका लागि नियमित रूपमै बलि दिने प्रचलन चलेको बुझिन्छ । शक्तिकै कुरा गर्दा- दैवी, राक्षस र प्रेतशक्तिको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । तिनीहरूले पिरेमा- मन्साउने, झारफूक गर्ने र नभएमा बलि दिने क्रम चलाएका देखिन्छन् । अनि निमपूजा (नियमित पूजा वा बलि) दिने प्रचलन बन्यो । यहीनेर बिमारीको सट्टामा बलि दिएर सुरक्षित हुन सिकेका देखिन्छन् । सोही मान्यता विस्तारको क्रममा शक्ति प्राप्तिका लागि पनि बलि दिनेक्रम चलेको स्पष्ट हुन्छ ।
बलिप्रथाको कारण र मान्यताको पक्षका बारेमा Holberg, 2005 : 118 लाई उदृत गर्दै Valeri Valirio (1985:62) ले उल्लेख गरेका पाइन्छन् । उनका अनुसार बलिप्रथाको मुख्य चारवटा सिद्धान्तहरू रहेका हुन्छन् । तिनमा, १) बलि देउतालाई चढाइने उपहार हो साथै यो मानव र देउताका बीचमा हुने आदान-प्रदान पनि हो । २) बलि देउता र मानिसको बीचमा भोजको निमन्त्रणा हो । ३) बलि फलोत्पादक वा कामयाबको लागि गरिने प्रस्तुती हो । साथै ४) बलि एकप्रकारको cathartic कार्य हो ।
शुरूमा बलिप्रथा प्रकृतिवादी तथा बोम्बोहरूले शुरू गरेको भन्ने देखिन्छ । त्यही प्रकृतिवादी तथा बोनवादीका शुरूवाती अवस्थालाई तिब्बती तथा तामाङ लगायतका हिमाली भाषामा म्हिख्या/मक्पा जस्ता शब्दको प्रयोग गरिएका पाइन्छन् । त्यही शब्द नै उद्विकासको क्रममा प्रकृतिपूजक र बोन बन्यो । बोनमा बलिले व्यापक स्थान लियो । बिमारीको अर्थ शारीरिक रूपमा आवश्यक ऊर्जाको अभाव नै हो । त्यही पूर्तिका लागि पनि बलिप्रथा सहायकसिद्ध हुँदै आएको देखिन्छ । उपचारको क्रममा मारिने पशुपङ्क्षीका मासु खुवाएपछि आवश्यक शारीरिक ऊर्जा पूर्ति हुनु र निको हुनु स्वाभाविक थियो ।
बलिप्रथा बोनमा मात्रै सीमित हुने कुरै थिएन । त्यही बोनलाई नै बोम्बो र शामनिजम लगायतका शब्दहरूद्वारा चिनाउँदै अगाडि बढिरहेको थियो । त्यस्तैमा बोनलाई नै सुधार गर्दै धर्मको इतिहासले बाटो अगाडि तताउँदै थियो । सोहीक्रममा सिन्धुक्षेत्रमा आइपुगेका आर्यनहरूले हाल प्रचलित हिन्दूधर्मको विकास गरेका थिए । यहाँ के स्पष्ट हुन्छ भने, हिन्दू भनेको तत्कालिक शामनिजमकै विकासित स्वरूप थियो । त्यसैले तत्कालिक सनातनी (हिन्दू)ले पनि बलिप्रथालाई अझै व्यापक बनायो । यसक्रममा गोमेध र अश्वमेध यज्ञको शुरूवात गरेका थिए । भनिन्छ, बत्तीस गुणले युक्त युवालाई प्रयोग गरेर अजम्बरी बुटी बनाउँथे । यससम्बन्धमा दाहाल यज्ञनिधिले रेडियो कार्यक्रममै बोलेका थिए । सोही दावीलाई समर्थन हुने गरी केही वर्ष अघि एक सामग्री प्रकाशन गरिएको थियो । सिंहदरबारभित्र यस्तो अजम्बरी बुटीको निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै थोत्रो भइसकेको भाँडोको समेत तस्वीर छापेको थियो ।
यस्तैगरी जैनमा पनि हत्याको बारेमा प्रशस्त उल्लेख गरिएका देखिन्छन् । जैनले कुनै पनि हत्यालाई वर्जित गरेको छ । यतिसम्म कि कुरा गर्दा र श्वास लिँदासमेत नदेखिने कतिपय कीरा मारिने सम्भावना हुन्छ । त्यस्ता हत्या हुन नदिन वा रोक्नका लागि मुखमा माक्स लगाउँछन् । चिसो पानीमा अनेक किटाणुहरू हुन्छन् । नुहाउँदाखेरि त्यस्ता किटाणुहरू पनि मारिन्छन् । त्यसैले गुरुहरू त्यस्ता हत्याको बात नलागोस् भनेर निकै सचेत हुन्छन् । उनीहरू तताएको/तातो पानीले मात्रै नुहाउँछन् । पानी तताउने काम भने त्यस्ता गुरुका चेलाहरूले नै गर्दछन् । यहीनेर पानी तताउँदाखेरि त्यसमा भएका किटाणु अवश्य मारिन्छन् । त्यसो भए ती किटाणु मारेको पाप वा दोष गुरुलाई लाग्दैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कतैबाट पनि पाइँदैन । विश्वमा रहेका धर्महरू विषयको कक्षामा हाम्रा गुरुले त्यत्तिपरसम्म चाहिँ नजाऔं न भन्नुभएको थियो । अर्थात त्यसको दोषबाट जैन गुरु मुक्त हुने कुरा हुँदैन । यद्यपि जैनहरू यत्तिसम्म सचेत हुन्छन् भन्न सक्छौं ।
हिन्दूभन्दा पछि देखापरेको बौद्धधर्मले भने पशुपङ्क्षी बलिमाथि निषेध गरेको थियो । उनीहरू घाँस सेउलाको प्रयोग गर्दासमेत कीरा मारिएलान् कि भनेर सचेत हुन्छन् । तामाङ लामामा समेत टप्चे गरेको बेला बुद्ध, धर्म र सङ्घमा प्रवेश गराउँछन् । शिकार नगर्ने लगायतको सपथ खुवाउँछन् । केही गरी जानीनजानी कीरा मारिएमा ओम मणि पद्मे हुँ बोलको मन्त्र जप्ने कसम खाएका हुन्छन् । त्यसैले नरबलिको कुरा आउने कुरै भएन । तामाङ समुदायमा पनि पशुपङ्क्षी (बोका/पाठापाठी, बाख्रा, कुखुरा र गोरु बलि प्रचलित थियो । तथापि मान्छेको रगत खेतबारीमा पार्नै नहुने मत विकास गरेका देखिन्छन् । तामाङ विश्वास अनुसार मानिसको रगत पर्ने बित्तिकै खेतबारीको उर्वरतामा ह्रास आउँछ । बौद्धधर्मभन्दा पछि देखापरेको ख्रिश्चियनमा बलिको खासै उल्लेख देखिँदैन । त्यस मत अनुसार पशुपङ्क्षीका सृष्टि नै मानव आहारका निमित्त गरिएको थियो । त्यसैले मारेर खान वा उपभोग गर्न सकिने भयो तर बलि दिँदा कसलाई भन्ने हुन्थ्यो ? र्इश्वर र तिनको छोराको मात्रै कुरा गर्ने र तिनले बलि खाँदैन भन्ने मान्यता भएकोले पनि बलिको अर्थ रहेन । मुस्लिममा भने सबैभन्दा मनपर्ने आफ्नै छोरोलाई रेटेर बलि दिँदा देउता खुशी भएको र छोरोको ठाउँमा भेँडा रेटिएको बताइन्छन् ।
बलि किन र कसलाई केका निमित्त दिने भन्ने हुन्छ । नेपाली समाजमा विशेषतः हिन्दू र बोन (झाँक्री)मा बलिप्रथा कायम रहेको छ । हिन्दू मान्यताअनुसार बिमारीको सट्टामा, साधना सफलताको लागि, शक्ति प्राप्तिका लागि, सुरक्षा प्राप्तिका लागि बलि दिने गरेका पाइन्छन् । त्यस्तैगरी मृतकका निमित्त अर्को लोकमा पनि धनधान्य साथै साथी होस् भन्नाका खातिर पनि बलि दिने गरेका पाइन्छन् । कुनै समयमा प्रचलित रहेको सतीप्रथालाई पनि एक किसिमको बलिको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसमा श्रीमानको चितामाथि जिउँदै श्रीमतीलाई जलाउने प्रचलन थियो । त्यसको प्रकृति र विश्लेषणले बलिको झल्को दिलाउँछ ।
अहिले आएर आफूभित्र रहेको राक्षसी, दैत्य तथा आसुरी भावको चाहिँ बलि दिने हो भन्ने गरिएका पाइन्छन् । यसलाई अन्यथा वा गलत मान्न सकिन्न । तथापि बलिप्रथा यत्तिमै सीमित छैन । साधनाको नाममा शक्ति प्राप्तिको कुरा पनि सँगै आउँछ । बालबालिकाहरूकै बलि चढाएका भन्ने समाचारहरू पनि पढ्दै आएका छौं । केही महिनाअघि मात्रै राजधानीमै नरबलिको तयारी भएको समाचार आएको थियो । हिन्दूमा अश्वमेध र गोमेध यज्ञको कुरा प्रशस्तै चर्चा गरिएका विषय हुन् । त्यसबेला एउटा गोरु वा घोडाको ३६ अङ्गहरू एकपछि अर्को गर्दै काट्दै/निकाल्दै बलिदिने गरेका पाइन्छन् । ती ३६ भागमा कसले कुन भाग पाउने, किन र कसरी भन्ने समेत उल्लेख गरिएका पाइन्छन् । अश्वमेध यज्ञका कारण अश्व (घोडा)समान बलबान छोरोको जन्म हुने विश्वास गरिन्थे । त्यसैले निःसन्तान राजपरिवारले त्यस्तो यज्ञ गर्दथे । यसप्रकार पुत्रलाभका लागि समेत बलि दिने प्रचलन चलाएका देखिन्छन् ।
त्यस्तैगरी आभिचारिक कृत्यद्वारा पनि हत्या गरेका प्रसङ्ग पाइन्छन् । त्यसक्रममा शत्रु वा विपक्षी वा मन नपरेका मानिसको पुत्ला बनाउँथे । त्यही पुत्लालाई जमीनमा गाड्थे वा काट्थे । त्यस्ता आभिचारिक कृत्यका कारण सम्बन्धित मानसिको मृत्यु हुन्थ्यो भन्ने गर्दछन् । यसलाई पनि बलिकै अर्थमा लिन सकिन्छ । किनकी बलिको अर्थ कसैको हत्या गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नु नै हो । कतिपयले शत्रुका जीउमा प्रेतात्मा लगाउँथे । जगाइका प्रेतात्मालाई बलि स्वरूप शत्रु व्यक्ति दिन्थे/ख्वाउँथे । त्यसपछि त्यो प्रेतात्माले शत्रु व्यक्तिलाई बिस्तारै वा तुरुन्तै मार्छ र भोग खान्छ भन्ने गरिन्थे । इन्का लगायतका कतिपय सभ्यताहरूमा मम्मी संस्कृति पाइएका छन् । मम्मी भन्नाले मानिसको सुकुटी भैसकेको लाश हो । समुदायलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन, सुख, सुविधा, पर्जन्य साथै सुरक्षा प्राप्तिका लागि समेत एकजना मानिसलाई भोग स्वरूप चढाउने गरिएका पाइन्छन् । ‘उर्गेनको घोडा’मा लेखक युग पाठकले, राणाको दरबार निर्माण गर्ने क्रममा एक जना तामाङ ज्यामी सिलिङबाट खसेर मरेको दृश्यको वर्णन गर्नुभएको छ । त्यसरी तामाङ कामदार मारिँदाखेरि राणाले चाहिँ- ‘दरबारले भोग लियो । अनिष्ठा टर्‍यो ।’ भनेको भनी लेख्नु भएको छ । । त्यस्तै दृश्य सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टरार्इको लागि घर बनाउने क्रममा घटेको थियो । पाँचजना तामाङ कामदार पुरिएकामा तीन जनाको ज्यान गएको थियो । शायद उक्त दरबार (भवन)ले पनि भोग खायो । बलि लियो । खै क-कसको अनिष्ठा टर्‍यो ! यसप्रकार दूर्घटनाको व्यहोराबाट मारिँदासमेत भोग(बलि)को रूपमा लिएका वा अर्थ्याएका पाइन्छन् । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता घटनाको लेखाजोखा गरेर साध्ये पनि छैन ।
बलि दिने क्रममा मारिएका वा मारिने पशुका मुटुको झिक्थे । झिकिएको मुटु कत्तिको उफ्रिन्छ भनेर हेर्थे । जतिधेरै उफ्रियो; त्यत्ति राम्रो मान्थे । कति जाति समुदायमा अझैपनि त्यस्तो प्रथा कायम रहेको देखिन्छ । बलि किन र कसरी दिन थालेका थिए भन्ने सम्बन्धमा श्याम बहादुर खड्काले आफ्नो कृति ‘मस्टो संस्कृति र परम्परा’, (२०७२)मा लेख्नुभएको छ । उक्त पुस्तकमा नरबलि सम्बन्धी कथाहरू उपशीर्षक समेत समाविष्ट रहेको छ । तामाङ समाजमा बोन वा बोम्बो/बोन्बो/बोन्पो भन्ने गरिन्छन् । तिनमा मुख्यतः लबोन र डेबोन हुन्छन् । लबोनलाई लप्ताबा पनि भन्ने गरिन्छन् । डेबोन भनेको उपचारक हो । त्यसमा पनि झारफूक/तार्ने/मन्साउने साथै ओखतीमूलो (जडिबुटी) चलाउने गरी दुर्इ प्रकारका हुन्छन् । यहीनेर बुझ्दै नबुझी बलिप्रथाका अनुयायी भन्ने गरिएको पाइन्छ । वास्तवमा कुलपूजामा अति नगण्य रूपमा बलि दिने गरिएका पाइन्छन् । कुनै एउटा कुलपूजामा एउटा कुखुरा वा एउटी बुढी बाख्री वा एउटा गोरु बलि दिने गर्दछन् । कतै पनि एउटा भन्दा बढी बलि दिने प्रचलन पाइँदैन । डेबोम्बोभित्रको झारफूक, मन्साउने र तार्ने भन्नेले मात्रै बलिप्रथामा जोड दिने हो । तथापि तिनले पनि पूरा कहानी नबतार्इ बलि दिन पाउँदैनन् । बलि दिनुअघि कहानी भन्न र दिएपछि मारिएका प्राणीको चित्तलाई निश्चित स्थानमा पुर्‍याउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।
तामाङ बोनले बलि जायज मानेको छ । त्यस मत अनुसार कुनै पनि पशुपङ्क्षीको बलि दिएपछि त्यसको स्यबुर्इबुबुर्इ दिनुपर्ने हुन्छ । ‘स्य’ले मासु र ‘बु’ले प्राण (चित्त/आत्मा)लाई बुझाउँछ । मारिएका वा बलि दिइएका पशुपङ्क्षीका रगत र मासु सम्बन्धित शक्तिलाई चढाउने गर्दछन् । सोहीक्रममा पङ्क्षी भए कलेजो र पाठापाठी भए तिनका मुटु, कलेजो, फोक्सो, फियो, मिर्गौला र बोसेआन्द्रा समेत पोलेर टुक्रा पर्छन् । ती मासुका टुक्राहरू सिन्कामा उनेर नैवेद भन्दै चढाउँछन् । त्यसरी चढाउनुको अर्थ मारिएका प्राणीका चित्तलाई खाना बिनै पेट भरिने, आगो बिनै तातो, पानी बिनै पानीको आवश्यकता पुग्ने, खानु नपर्ने, लगाउनु पनि नपर्ने स्थानमा पुर्‍याउनु हो । त्यसले प्रतीकात्मक रूपमा आमाको गर्भ वा फुललाई इङ्कित गरेको हुन्छ । यसप्रकार बलि चढाइएका वा मारिएका पशुपङ्क्षीलाई पुनः जन्मका लागि आमाको गर्भमा लगेर प्रत्यारोपित गर्नु पर्दछ । यसको एउटै दर्शन भनेको जैविक विविधतालाई कायम राख्नु हो । सबै प्राणीलाई मृत्युपछि थर्पेलिङ (सुखावती भुवन)मा पठाउने हो भने जैविक विविधता बिग्रन्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता देखिन्छ ।
तामाङ समाजमा- शिकार गरिएका प्राणीका समेत स्यबुर्इबुबुर्इ दिने प्रचलन रहेको छ । उनीहरू वनकुखुरा (लुइँचे) र कालिज आदिलाई स्थानीय वनझाँक्रीको कुखुराको रूपमा चिन्छन् । खरायो वा दुम्सीलाई तिनैका खरायो अनि मिर्ग लगायतकालाई तिनका बाख्राको रूपमा लिन्छन् । त्यसैले शिकार गर्नुअघि वनझाँक्रीलाई अक्षता दिने र क्षमा माग्ने र मारिएपछि पनि स्यबुर्इबुबुर्इ दिने गर्दछन् । त्यसो त सम्बन्धित वनसँग जोडिएका शक्तिहरू साथै देउदेउतालाई समेत उनीहरूले सम्झेका हुन्छन् । उनीहरूका अनुसार कुनैपनि प्राणीको हत्या वा बलिपछि स्यबुर्इबुबुर्इ नदिएसम्म खानयोग्य हुँदैन । त्यसैले कुनै पाहुना आइपुग्दा कुखुरा काटेर खुवाउनुपर्‍यो भने केही नियम पालन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले घरभन्दा अलिक परको ढुङ्गोमा जान्छन् । चोखोपानीले ढुङ्गालाई धोएको/पाखलेको अभिनय गर्छन् । अलिकति अबीर लगाउँछन् । कपासका वा नयाँ कपडा सिलाउने क्रममा काटिएका टुक्राहरूलाई धजाको रूपमा प्रयोग गर्छन् । त्यसपछि बलि दिँदाजस्तै गरी रेट्छन् । पूरै छिनाउँदैनन् । यहाँ भनिएअनुसार नगरेपनि बलि दिँदा जस्तै गरी रेटेर मात्रै मार्छन् ।
बोन मत अनुसार स्यबुर्इबुबुर्इ नदिएसम्म मारिएका वा बलि दिइएका प्राणीको चित्तले मुक्ति वा पुनःजन्मको मार्गमा प्रवेश गर्न सक्तैन । स्यबुर्इबुबुर्इ दिएपछि भने त्यसको चित्त/आत्माले आफ्नो मार्ग समात्न सक्छ । त्यसपछि भने मारिएको पशुपङ्क्षीका मासु साग समान हुन्छ । अन्यथा मासुमा डिप वा बर्ज्या रहन्छ । त्यसैले बेच्नका लागि पसलमा राखिएका मासु खान नहुने तर्क गर्छन् । यदि पसलबाट किनेर ल्याउने हो भने त्यसले पनि आफूले स्यबुर्इबुबुर्इ दिन सक्नुपर्छ । विशेषतः गाई गोरु वा राँगा आदि ठूला जन्तुका मासु घरमा ल्याउँदाखेरि त्यसमा अनेकौं नकारात्मक शक्तिहरू पछि लागेर वा टाँसिएर आउने विश्वास गर्दछन् । मारिएका प्राणीको स्यबुर्इबुबुर्इ पनि नदिएको हुन सक्छ । त्यसैले त्यस्ता मासुलाई शुद्ध पार्न वा सागसमानको बनाउनैका निमित्त ढोकाबाट भित्र छिराउनुअघि चोखो पानी छर्कने गर्दछन् । पानी छर्केपछि भने टाँसिएर आएका नकारात्मक शक्तिहरू भाग्छन् वा फर्केर जान्छन् । मारिएको पशुको चित्तले पनि मुक्तिमार्ग समाप्त सक्छ । मासु शुद्ध वा खानयोग्य हुन्छ । बोनमा प्रचलित यही स्यबुर्इबुबुर्इबाटै पछिल्लो समयमा लामा (बौद्ध)ले फोवाको अवधारणा विकास गरेको भन्ने देखिन आउँछ ।
यसप्रकार बिमारबाट निको हुन, शक्ति वा जीत प्राप्त गर्न, आफ्नो (मान्छेको) सट्टामा अन्य (पशुपङ्क्षी)लाई बलि दिएर आफू सुरक्षित हुन वा मृत्युबाट बच्न, पशुपङ्क्षीका बथानको सुरक्षार्थ, देउदेउतलाई खुशी पार्न, पर्जन्य अर्थात् राम्रो वर्षा, फसल तथा दैवीप्रकोपबाट सुरक्षित रहन बलि दिन्छन् । तामाङ समाजलाई हेर्ने हो भने बालीनालीको सफलता अनि सफलता हात परेपछि धन्यवाद ज्ञापन स्वरूप पनि बलिसहित पूजा गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी कुनै पनि शक्तिलाई जगाएर साधना पूरा गर्न वा खुशी पार्न साथै शत्रुता भएको व्यक्तिको हत्याका लागि प्रेतात्मालाई जगाएर/लगाएर शत्रुको बलि दिएका भन्ने मान्यता वा दर्शन बनाएका देखिन्छन् । बलि मुख्यतः तीन व्यहोराबाट दिने गरिन्छन् । पहिलो भनेको भाकल गरेर वा नियमित पूजाका क्रममा, दोस्रोमा पानी पारेर (पङ्क्षीलाई पानी हालेर निश्चित गरी तोकेर) । यसैलाई तामाङ भाषामा ‘स्हुङ थन्बा’ भन्ने गर्दछन् । तेस्रोमा कुनैपनि बेला बिमार पर्दाखेरि तुरुन्तै बलि दिने गर्दछन् ।
स्मरणीय तथ्य यो पनि हो कि- बलि भनेको एक प्रकारको हिंसा हो । अझै भनौं सबै बलिहरू हिंसा नै हुन् तर सबै हिंसाहरू बलि होइनन् । बौध्ददर्शनले हिंसाको बारेमा धेरै चर्चा गरेको पाइन्छ । उक्त दर्शन अनुसार हिंसा आपराधिक कृत्य हो । कसैले पनि कसैको हिंसा गर्नु हुँदैन । हिंसा भनेको मारेर वा हत्या गरेर वा बलि दिएर मात्रै हुँदैन । हिंसा मुख्यतः मन, वचन र कर्मबाट हुन्छन् । लोभ, लालचा, र्इर्ष्या मनमा हुन्छन् । त्यसैले मनबाट पनि हिंसा हुन सक्छ । त्यस्ता हिंसाको दोषबाट जोगिनका निमित्त त मनलाई शुद्ध राख्नु/पार्नु पर्छ । कठोर वा नराम्रो बोलीको प्रयोगले पनि हिंसा हुन्छ । त्यसैले त भन्छन्; ”मारिदेऊ बिन्ती तर वचनले नमार ।” व्यवहार वा संस्कारका नाममा अनेक हिंसा हुन्छन् । त्यसो त देह/शरीरबाट गरिने वा कर्मद्वारा प्रत्यक्ष वा भौतिक रूपमा हिंसा हुने गर्दछन् । यहीनेर पटक-पटक प्रश्न उठ्छ- हामीमध्ये को कति हिंस्रक छौं वा मुक्त छौं ? मैले कुनै पनि हिंसा गरेको छुइनँ भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने हामीमध्ये कति जना छौं ??? यस्ता प्रश्नको कसीमा पास हुने मानिस पाउन निकै मुस्किल देखिन्छ ।
४. विगतदेखि वर्तमान
बलि प्रथाको ऐतिहासिक पाटो धेरै पुरानो साथै लामो देखिन्छ । त्यसैले यत्ति नै समयमा वा फलानाले नै शुरू गरेको थियो भनेर तोक्न कठिन छ । यही नै यसको ऐतिहासिकता हो । यसैलाई कमजोरीको रूपमा लिन्छन् भने विरोधको लागि विरोध भन्ने मात्रै हुन्छ । यसको पक्ष वा विपक्षमा बसेर सही वा तथ्य बाहिर ल्याउन सकिन्न । त्यसैले नितान्त समाजशास्त्रीय/मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणको आधारमा अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । हिन्दू धर्मशास्त्र तथा संस्कार संस्कृतिमा बलिको आफ्नै परिभाषा रहेको छ । हिन्दूभन्दा अगाडिदेखि नै झाँक्रीले बलिलाई प्रचलनमा ल्याएका देखिन्छन् तथापि यहाँ भने पहिले हिन्दूमा रहेका केही बलिप्रथाका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । त्यसपछि मात्रै झाँक्री र बौद्धमा रहेको बलि बारेमा चर्चा गरेको छु ।
हिन्दूलाई शुरूमा सनातन धर्म भनिन्थ्यो । धेरैपछि आएर मात्रै आर्यन् अनि हिन्दू भन्न थालिएको हो । भारतमै पनि हिन्दू होइनौं सनातनी हौं भन्ने आन्दोलन चलाएको देख्न सकिन्छ । हिन्दू शब्दको नकारात्मक अर्थ लाग्ने हुनाले नै त्यस्तो आन्दोलन चलाएका देखिन्छन् । जेहोस् यहाँ भने सामान्य भाषामै हिन्दूलाई बुझ्ने गरिएकोले सोही अनुरूप उल्लेख गरेको छु । हिन्दूको पहिलो र अति महत्त्वपूर्ण रूपमा ऋग्वेदलाई लिइन्छ । यस वेदमा यज्ञादिको उल्लेख गरिएका छन् । सोही वेदका साथै सम्बन्धित अन्य केही ग्रन्थहरू तथा प्रकाशित सामग्रीहरूलाई समेत उदृत गर्दै डा. सुरेंद्र कुमार शर्मा ‘अज्ञात’ले ‘क्या बालू की भीत पर खडा हैँ हिंदू धर्म ?’ नामक कृतिमा विस्तृत चर्चा गरेका छन् । उक्त ग्रन्थमा ‘प्राचीन भारत में गोहत्या एवं गोमांसाहार’ शीर्षक अन्तर्गत पृष्ठ १२५ देखि १६२ सम्म उल्लेख गरिएको छ । ऋग्वेदको दशौं मण्डल अन्तर्गतको १६ औं सूक्तको ७ औं मन्त्रमा रहेको ‘अग्नीर्वर्म परि गोभिर्व्ययस्व स प्रोर्णुष्व पीवसा मेदसा च ।’को अर्थ लगाउँदै ‘मृत, तुम गोधर्म के साथ अग्नि शिखा स्वरूप कवच को धारण करो. तुम मेद औ मांस से आच्छादित होओ’ भनी अर्थ्याएको छ । त्यस्तैगरी ‘यजुर्वेद मे, गाय की चरबी से पितरों को तृप्त करने और परिणामस्वरूप कामनाएं पूरी होने की बात कही गई हैः वह वपां जातवेद : यत्रैनान्वेत्थनिहितान्पराके. मेदसः कुल्या उप तान्स्रवन्तु सत्या एषामाशिषः सन्नमन्तां स्वाहा । (यजुर्वेद ३५/२०)” भनी उल्लेख गरेको छ । यसप्रकार मृतकको दाहसंस्कार तथा पितृपूजनका क्रममा गोरुकै बलि दिएको भन्ने देखिन्छ ।
ऋग्वेदकै नवौं मण्डलको चौथो सूक्त अन्तर्गतको पहिलो मन्त्रको भाष्यको उत्थानिका (भूमिका)लाई उदृत गर्दै, ”ब्राह्मणे वृषभं हत्वा तन्मांसं भिन्न-भिन्नदेवताभ्यो जुहोति. तत्र वृषभस्य प्रशंसा तदंगानां च कतमानि कतमदेवेभयः प्रियाणि भवन्ति तद् विवेचनम्. वृषभबलिहवनस्य महत्त्वं च वर्ण्यते. तदुत्पन्नं श्रेयश्च स्तूयते. अर्थात ब्राह्मण वृषभ (बैल)को मारकार उस के मांस से भिन्नभिन्न देवताओं के लिए आहुति देता है. इस मे वृषभ की प्रशंसा और उस के अंगों मे कौनकौन सा अंग किसकिस देवता के लिए प्रिय है- इस का विवेचना किया गया है और वृषभ की बलि दे कर हवन करने के महत्त्व का व उस से प्राप्त होने वाले श्रेय का वर्णन किया गया है.” भनिएको छ । त्यस्तैगरी महीधर भाष्यलाई उल्लेख गर्दै, ”हे जातवेद, पितरों के लिए तुम गाय के चर्म विशेष को ले जाओ. तुम दूर स्थित पितरों को जानते हो. उस चर्म विशेष से निकलने वाली मज्जा (चरबी) की नदियां पितरों की और बहे. और उन के लिए दान करने वालों की सब कामनाएं पूरी हो.” भनेर लेखेको पाइन्छ । यसप्रकार पितृका लागि गाईको छाला र त्यसमा टाँसिएको बोसोको नदीको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो बोसोको नदी पनि पितृहरू भएतिर बगोस् अनि त्यसका लागि दान गर्ने सबैको मनकामना पूरा होस् भनिएको देखिन्छ ।
त्यस्तैगरी उक्त ग्रन्थको पृष्ठ १२८ देखि १२९ मा ”ऋग्वेद के एक सूक्त (१०/८५) सो जिसे विवाह सूक्त कहा जा सकता है, विवाह संस्कार के प्राचीनतम् रूप का पता चलता है. दूल्हा और बारात दुलहन के घर जाते थे (१०/१७/१, यहाँ दुलहन बारात के साथ मिल कर खाना खाती थी. मेहमानों का उस अवसर पर मारी गई गौओं का मांस परोसा जाता था. (१०/८५/१३) ” भनि उल्लेख गरिएको छ । यसमा भने बलिभन्दा पनि विवाह भोजका लागि मासुको रूपमा प्रयोग गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यसप्रकार गोमांसको तत्कालिक भारतमा ठूलो महत्त्व रहेको बुझिन्छ । ‘उपनिषदों में वेदज्ञ, दीर्घायु और वाक्पटु पुत्र के चाहने वालों के लिए बैल के मांस को खाने का विधान है.” भनिएको छ । डा. सुरेंद्र कुमार शर्मा ‘अज्ञात’ले गृह्यसूत्रलाई उदृत गर्दै, ‘गृह्यसूत्रो. मे. मधुपर्क का विधान है. मधुपर्क के संदर्भ में गृह्यसूत्रों मे गाय को मारने और उसे खाने का उल्लेख मिलता है. कुछ गृह्यसूत्रों से संबंधित अंश इस प्रकार हैं : ‘आपस्तंब गृह्यसूत्र’ में लिखा है कि ‘जब वेदज्ञ ब्राह्मण, कोई स्नातक या आचार्य घर पर आए, उस का ‘मधुपर्क से सम्मान करे. यदि वह आज्ञा दे तो ‘गौरस्यपहतपा’ इत्यादि मंत्र पढ कर उसे मार कर आगंतुक को दे.’ (१३-५-१५ से १७) भनेर लेखेका छन् ।
त्यसो त अश्वमेघ यज्ञको क्रममा घोडा बलि दिने प्रचलन रहेको थियो । यसको मुख्य ध्येय भने पुत्रालाभ रहेको थियो । यदि कसैको छोरा भएन भने अश्वमेध यज्ञ गर्न सकिन्थ्यो । तथापि खर्च तथा विधि विधानका कारण राजाले भन्दा अरूले त्यो यज्ञ गर्न सक्तैनथ्यो । यस सम्बन्धमा डा. सुरेंद्र कुमार शर्मा ‘अज्ञात’ले उल्लेख गरेका छन् । उक्त वर्णन साह्रै लाजमर्दो पनि लाग्न सक्छ । सोही संस्कार विशेषलाई लिएर चार्वाकले पनि साह्रै कठोर आलोचना गरेका कुरा गोपीरमण उपाध्ययले ‘प्राकृतिक भौतिकवाद’ नामक पुस्तकको पृष्ठ ३०५ मा उल्लेख गरेका छन् । उक्त पुस्तक नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको हो । यसप्रकार पुत्रलाभका लागि समेत बलि दिने प्रचलन रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
”गणेश क्षेत्रीले ‘हिन्दू धर्मशास्त्रमा गोहत्या र गोमांसहारको परम्परा’ शीर्षक राखेर ‘कइरन’ मासिक वर्ष १ अंक ३ (१९९१) मा लेखेका देखिन्छन् । क्षेत्रीज्यूले ‘संस्कृतको एउटा पुरानो विश्वकोष ‘शब्द कल्प द्रूममा” गोमेध यज्ञ र त्यसमा काटीने गाइको विवरण दिदै ”गो” शब्दबाट गाई भन्ने बुझिने र यस्तो गाई सातखुरे वा नौखुरी नभएकी, सिंग नभांच्चिएकी, कानी नभएकी र कानमा चोट नभएकी हुनुपर्ने साथै गोमेघ यज्ञको फल यजमानका निमित्त स्वर्ग प्राप्ति र गाईका निमित्त गोलोक प्राप्ति हुने भनी लेखिएको छ ।” (यज्ञ विशेष, अत्र स्त्री गोपाशुः मत्रेपु स्त्रीलिंग पठात् तस्य लक्षणम्- सप्तशफत्व नवशफत्व- भग्न श्रृंगत्व-काणत्व – छिन्न कर्णत्वादि – दोष रोहित्यम् प्रयोग सवों पि छागपशुवत् यज्ञमानस्य स्वर्ग । फलम् गोश्च गोलोक प्राप्तीः (शब्द कल्प द्रूम) भनी उल्लेख गर्नु भएको छ । यहाँ गोमेध यज्ञमा गोई बलि दिने प्रचलन रहेको र त्यसरी बलि दिएको प्रतापले स्वर्ग प्राप्त हुने दावी गरेको देखिन्छ । अर्थात स्वर्ग प्राप्तिको मनशाय राख्नेले गोमेध यज्ञ गर्ने गरेका भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तैगरी मारिएकी गाईले पनि गोलोक प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यस्तै मत वा दर्शन तामाङ समुदायले दिने बलिप्रथामा पनि पाइन्छन् । उनीहरूका विश्वास अनुसार मारिएका प्राणीका चित्तले पुनः आमाको गर्भमा सहज रूपमा बास पाउँछन् ।
उक्त लेखमा क्षेत्रीज्यूले अगाडि उल्लेख गर्नु भएको छ- ”खादीर र गमील गृहसूत्रहरूमा घरको जगको स्थापना गर्दा गृहदेवताका निमित्त कालो गाई काट्ने प्रसंग छ ।” क्षेत्रीज्यूका अनुसार ”ऋग्वैदिक युगदेखि इशाको छैठौं शताब्दी ताकासम्म लेखिएका धर्मसूत्रहरूमा कतै कतै छिटपुट विरोधको बाबजुद पनि हिन्दू समाजमा गौहत्या र गौमांसहारको परम्परा एकनास रही आएको देखिन्छ । पछिल्लो धर्मसूत्रहरूका युगदेखि भने यस परम्पराको निषेध र परिहेज शुरू भएको देखिन्छ । … कामधेनु सम्बन्धी धारणा र सिद्धान्त यसैताका सृजना गरिए । भूल चुकद्वारा गोहत्या भएमा प्रायश्चित गर्नु पर्ने अनिवार्यताको थालनी गरियो । यस बाहेक गोहत्याको कारणले जातिच्यूत हुने, घोर नरक भोग्नु पर्ने र सामाजिक बहिष्कार हुन जाने नियमहरू पुराण कालसम्ममा व्यापक रूपमा समाजमा प्रचलित भए ।”
बलिको एक उद्देश्य भनेको मांस उपभोग पनि हो । यहीनेर नरबलि दिएपछि मानिसको मासु खान्थे त भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ । अनुमान लगाउन सक्छौं- शायद मानिसको मासु भने खाएनन् होला । मानवशास्त्रीय अध्ययनको क्रममा कुनै एक आदिवासी जनजाति समुदायमा मृतकको दाहसंस्कारको कुरा पढेको थिएँ । तिनीहरूमा लास जलाउँदै गर्दा उक्त लासको गिदी चाहिँ निकालेर सबै मलामीले खाने प्रचलन रहेछ । एकपटक कुनै असाध्ये रोग लागेको मानिसको गिदी खाएपछि मलामी गएका मानिसजति सबै मरेका थिए । सोही घटनापछि उक्त समुदायको अस्तित्त्व नै समाप्त भएको भन्ने पढेको थिएँ । विदेशमा गएका र घटेका कतिपय घटनामा मानिसले मानिसकै मासु खाएका भन्ने सुनिन्छन् । त्यसरी मानिसकै मासु खानेलाई अङ्ग्रेजीमा क्यानिबाल/क्यानिबालिजम् जस्ता शब्दको प्रयोग गरेका पनि देख्न सक्छौं । कतिपय स्थान विशेषमा मानवभ्रुणको परिकार निकै महत्त्वपूर्ण मान्छन् भन्ने गरिएका पाइन्छन् । अघोरी परम्परामा पनि मानव मांसको प्रयोग हुन्छ भन्ने गर्दछन् । यता बौद्धको पनि निङ्मा परम्पराको प्रणेता गुरु पद्मसंभवले पनि विभिन्न साधनाका क्रममा मानव मांस खाएका भन्ने देखिन्छन् ।
हाल हिन्दू भन्नेहरूले वेद, पुराण, श्रुति र स्मृति आदिलाई आधार मानेका पाइन्छन् । ”मनुस्मृतिको पाँचौं अध्यायको अठारौं श्लोकमा साही, सेर्इ गोह, गैडा र खरायो आदि पाँच नङ भएका अनि एकापटि मात्र बंगार (दाँत) भएका उंट बाहेक सबै खान हुन्छ” भनेर उल्लेख गरेको भन्ने तथ्य अर्जुन पाख्रिन ज्यूले ‘कइरन मासिक’ वर्ष १ अंक ४ (१९९१)मा ‘गाई काटिंदा हिन्दूहरूलाई आपत्ति किन ?’ भन्ने शीर्षक राखी एउटा लेख लेख्नुभएको देखिन्छ । गोमांसकै कुरा गर्नुपर्दा, विविसी हिन्दीबाट साभार गरेर अनुवाद तथा सम्पादनसहित भन्दै ‘सनसनीपूर्ण खुलासा : प्राचिन हिन्दुहरूले गाई खान्थे’ शीर्षकमा एक लेख प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त लेखमा ऋग्वेदकै दशौं मण्डलको ९१ सूक्तमा रहेको १४ औं मन्त्रलाई उदृत गर्दै ”अग्निका लागि घोडा, बयल, साँढे, नब्याएका गाई र भेडाको बलि दिइन्थ्यो । सोही मण्डलको ७२ औं सूक्तको छैटौं मन्त्रलाई इङ्कित गर्दै ”गाईलाई तरवार वा कोदालोले हानेर मारिन्थ्यो” भनेर उल्लेख गरेको देखिन्छ । साँच्चैमा उक्त वेदको १०/९१/१४ मा यस्तो उल्लेख गरिएको छ, ”यस्मिन्नश्र्व ऋषभास उक्षणो वशा मेषा अवसृष्टास आहुताः । कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे हृदा मतिं जनये चारुमग्नये ।।१४।।” लेखिएको छ । यसप्रकार हिन्दूले छैटौं शताब्दीताकासम्म गोमांसा भोजन गर्दै आएका भन्ने देखिन्छन् । तिनै ऋग्वेद, यजुर्वेद र महाभारतको द्रोण पर्व, शान्तिपर्व र वनपर्व, महाकवि भवभूति-कृत ”उत्तररामचरित”, गृह्यसूत्र, राहुल सांकृत्यायनको ‘दर्शन दिग्दर्शन’, एच.के. ब्यासको ‘भारतीय संस्कृतिका श्रोत’, मिमांसा सूत्र, कात्यायन सूत्र, मनुस्मृति, गोपथ ब्राह्मण, ३.१८, वेदहरूमाथि सायणाचार्यको भाष्य, ”मेघदूत” पूर्वार्ध्द, श्लोक ४५, शब्द कल्प द्रूम’, बृहद अरण्यक उपनिषद् ६/४/१८ साथै वैदिक कोष-प्र. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, पृ. ३७४ आदिलाई उदृत गर्दै गणेश क्षेत्री, अर्जुन पाख्रिन र नगेन्द्र शर्माले तयार पारेका गोमांस सम्बन्धी तीनवटा लेखहरू ‘कइरन’ मासिकले छापेको देखिन्छ । उक्त लेख छापिएपछि सोही बेला कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीयमा- कइरन मासिकको सम्पादकलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर लेखेको कुरा अग्रज तामाङ अभियन्ता तथा लेखकहरूले सुनाउँदै आउनुभएको छ । स्मरणीय कुरा के हो भने अनेक नाम वा संस्कारको बहानामा बलिप्रथा कायम रहेको भन्ने देखियो भन्न खोजिएको मात्र हुनाले अन्यर्थमा नलिन/नबुझिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु ।
बलिप्रथाको महिमा बारेमा प्रशस्तै उल्लेख गरिएका पाइन्छन् । दशैँको बेला ठूलो सङ्ख्यामा बलि दिने गरिएको छ । बलि दिएर देेवीलाई खुशी पार्ने र देवीको शक्ति बढाउने गर्दछन् । त्यस्तैगरी आफूभित्र रहेको आसुरी सोचको प्रतीक स्वरूप बोका र राँगा बलि दिन्छन् । यज्ञको लाभ सम्बन्धमा जनकलाल शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘हाम्रो समाज : एक अध्ययन’को पृष्ठ १२४ देखि १२७ सम्ममा ”हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा यज्ञ गरेको धूवाँबाट पर्जन्य वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास पनि यसैका अुनरूप देखिन्छ ।” भनेर उल्लेख गरेका छन् । यसक्रममा शर्माले श्रीमद्भागवद्गीताको ३।१४ लाई उदृत गरेका छन् । उक्त श्लोकमा यस्तो लेखिएको छ- ”अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव । यज्ञाद्भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भव ।।’ यसको उदाहरण स्वरूप शर्माज्यूले ‘काठमाण्डू उपत्यकाको क्षेत्रपाटी टोलमा ‘घोप्टे गणेश’ नामको एउटा देउता छ ।’ भन्दै त्यहाँ राँगा बलि दिने गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसरी बलि दिनेक्रममा राँगाले प्राण छोड्न नसकिरहेको, चलमलाउन पनि नसकिरहेको र अति कष्ट खप्न नसकेर बगाएका आँशु बगाएको तथा बगेको रगतको मात्रा अनुसार त्यो साल वर्षा कत्तिको हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउँछन् भनेर लेख्नुभएको छ । उक्त दृश्य सामान्य मुटु भएका मानिसले त हेर्न समेत नसक्ने शर्माज्यूले उल्लेख गर्नु भएको छ । त्यस्तै संस्कृतिको उदाहरण दिने क्रममा ”उडीसा प्रदेशमा बस्ने कुर्इ भाषी खोँड जनजातिमा पनि यस्तै विश्वास पाइन्छ । खोँड जनजातिमा वर्षा ल्याउन नरबलि दिने चलन छ । उनीहरूको विश्वासअनुसार बलि दिइने मुनष्यले जति धेरै आँसु बहाउँछ, जति धेरै रगत बग्दछ; त्यति नै राम्रो वर्ष हुन्छ । यो कुरा कानुनसम्मत होइन तर त्यहाँका जनता त्यस्तै गर्नमा विश्वस्त एवं अभ्यस्त छ ।” लेख्नुभएको छ ।
बलिप्रथाकै सम्बन्धमा अनुवादक मुकेश लामाज्यूद्वारा अनुवाद गरिएको ‘डाकिनी येसे छोग्याल’ (जीवनी)को पृष्ठ ८८ देखि ८९ सम्मलाई हेर्न सकिन्छ । उक्त ग्रन्थमा ”शरद् ऋतुमा उनीहरूले एक हजारवटा जङ्गली खच्चरहरूको रगत भोग चढाउने उत्सव मनाउँथे । वसन्त ऋतुमा नयाँ जीवनको बदलामा देवतालाई मृगिणीको खुट्टा भोग चढाउने उत्सव आयोजना गर्दथे । हिउँदमा उनीहरूले बोन देवता (बोनल्हा)हरूलाई रगतको भोग चढाउँदथे भने वर्षा ऋतुमा प्राणीहरूको हत्या गरेर बोन गुरु (सेनराव)लाई भोग चढाउँथे । उनीहरू प्राणीहरूको हत्या गरेर मानिसको मृत्यु टार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दथे ।” भनी उल्लेख गरिएको छ । यसै अनुच्छेदलाई लेखक रुद्रसिंह तामाङज्यूले आफ्नो पुस्तक ‘तामाङ संस्कार र संस्कृति’ (ताम्बा, बोन र बौद्ध संस्कृतिसहित)मा उदृतसहित उल्लेख गर्नु भएको छ ।
बोम्बो र लामा मिश्रणसहितको एक किंवदन्ती अनुसार- जीवा कुन्तो स्हङ्पो’ नामक एक लामा थिए । उनकी आमालाई बोक्सीको आरोप लागेको थियो । आमा बोक्सी हो कि हैन रहेछ भनेर जीवा कुन्तो स्हङ्पोले जाँच्ने क्रममा आमाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि आमाको मृत्यु संस्कारको लागि मामालाई गुहार्न पुगेका थिए । मामाले जिउँदो मानिसको खप्परमा करुको रक्सी सगुन सहित आउन भनेका थिए । सोही क्रममा स्हङपोले एकजना मानिसलाई चट्याङ तानेर प्रहार गरे । ती मानिस अर्काकी स्वास्नी भगाएर जाँदै थिए । चट्याङको प्रहारले वेहोश भएको बेला तुरुन्तै स्हङ्पोले उक्त मानिसको खप्पर निकालेका थिए । यसप्रकार मानव हत्याको कुरा पाउँछौं । त्यस्तैगरी, सिन्धुली मावरका तामाङ गाउँतिर प्रायः चैततिर ‘स्यबी छ्योइबा’ गरेका पाउन सकिन्छ । ‘स्यबी’ भन्नाले जाँडको छोक्रा हो । कथन अनुसार- कुनै समय ‘डिल्बा लामा, दोर्जे लामा र दुब्ले लामा नाम गरेका तीन जना लामाहरू हिमाली भेग हुँदै तिब्बततिर जाँदै थिए । जाँदा-जाँदा पोङ्दी लमो, छ्योङ्दी लमा, सुन लमो र सुन डोल्मो भन्ने नाम गरेका लमो र डोल्मोहरू कहाँ बास बस्न पुगेछन् । त्यहाँ अरू खानेचिज नपाएपछि प्राण धान्नका लागि भनेर जाँड पिएछन् । जाँडले मात्तिएपछि तिनीहरूबीच झगडा परेछ । झगडाको क्रममा जाँडको घ्याम्पो नै फुटाएछन् । त्यसैका टुक्राहरूले एक आपसमा हानाहान गरेछन् । तिनीहरू त्यहीँ मारिएछन् । अकाल मृत्यु भएकोले तिनका चित्त प्रेत भएछन् । त्यसपछि जाँडलाई पिर्न थालेछन् । तिनले पिरेपछि जाँड बिग्रन्छ । तिनीहरूबाट जाँडलाई जोगाउनकै निमित्त अहिले पनि ‘स्यबी छ्योइबा’ गर्दछन् । चैत मासको सोमबार, बुधवबार वा शुक्रबारमध्ये एकदिन बेलुकी तोर्मो समेत बनाएर घरभन्दा अलिक पर लगेर एउटा पोथी (कुखुरी) बलि दिने गरेका पाइन्छन् ।
तुफान न्यौपानेले ”बुद्ध : मथि र यथार्थ” शीर्षक राखेर हिमाल पत्रिकाको (वर्ष २३, अङ्क ३२, पूर्णाङ्क ४१७, २०७१) को पृष्ठ ३१ मा ”बुद्ध जन्माउँदै गर्दाको मायमादेवीको मूर्तिलाई कुनै समय वनदेवी (काली) भनेर बलि दिइन्थ्यो । लुम्बिनी पत्ता लागेको दुर्इ वर्षपछि सन् १८९८ मा मात्र बलि रोकिएको थियो” भनि उल्लेख गर्नु भएको छ । त्यस्तैगरी वीरबहादुर वाइबाज्यूले बौद्धमा रहेको ”ममो पुकासिद्धि (अजिमा)लाई पनि राँगा र बोका बलि दिने प्रचलन रहेका र पछि स्थानीयबासीको चर्को विराधका कारण हटाएको थियो” भन्दै बलि शुरू र अन्त्य सम्बन्धमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । बलिलाई हिंसा र हत्याको रूपमा पनि बुझ्न सकिने हुन्छ । त्यसो त आत्महत्या भन्ने शब्द पनि छँदैछ । आत्मदाहको कुरा पनि देख्दै आएका छौं । फ्री तिब्बेट आन्दोलन चलिरहेकै देखिएको छ । सोही आन्दोलनको नाममा केही वर्षअघि मात्रै बौद्ध जस्तो पवित्र मानिएको स्थलमा एकजनाले आत्मदाह गरेका थिए । स्मरणीय तथ्य यो पनि हो कि, त्यसरी आन्दोलनका क्रममा आत्मदाह गर्नेमा उनी १०१ औं व्यक्ति थिए । यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न कसैले उठाएमा जवाफ के होला ?
बोनलाई बलिप्रथाको मुख्य पक्षपाती हुन् भन्ने अवधारणा बनाएका पाइन्छन् । तथापि बोनको कुरा गर्नु अघि तामाङ बोनलाई कुन चाहिँ हो भनेर चिन्न आवश्यक देखिन्छ । बोनमा सेतो र कालो गरी दुर्इ थरी रहेको धेरैले दावी गरेका छन् । कतिपयले भने कसैलाई सेतो र कसैलाई कालो भनेर नाप्ने यन्त्र के हो भनेर प्रश्न गरेका पाइन्छन् । कसले अधिकार दियो र कालो र सेतो भन्न सक्यौ भन्ने प्रश्नसमेत तेर्स्याएका देखिन्छन् । जेहोस् तामाङ बोन भनेको कथित कालो बोन हो । उनीहरू आफ्ना कुललाई एउटा भाले वा बाख्री वा गोरु बलि दिने गर्दछन् । अन्य पूजाको बेलामा एकका दरले बलि दिन्छन् । कुनै अवसरमा भने एकभन्दा बढी शक्ति वा देउतादिलाई बलि दिने हुँदा दुर्इ चार वटासम्म कुखुरा बलि दिएका पाइन्छन् ।
तामाङ बोनमा राँगा, सुङ्गुर र हाँसको बलि दिएको खासै पाइँदैन । यस समुदायमा कुखुरा (भाले र पोथी), पाठापाठी र परेवा बलि दिने प्रचलन रहेको देखिन्छ । विशेषतः कुल साथै मौलिक तामाङ देउतालाई भने कुखुरा र पाठापाठी मात्रै बलि दिन्छन् । केही थरका तामाङमा भने गोरु बलि दिने प्रचलन रहेपनि गोरु बलि दिन बन्देज लगाएकोले प्रतीकात्मक रूपमा मान्दै आएका पाइन्छन् । त्यसो त स्योप्टो (घ्यङसिङ) मन्साउने क्रममा गोरु बलिको कुरा आउने गर्दछन् । त्यतिखेर पनि गोरु वा गाईको मासुलाई नै प्रतीकात्मक रूपमा बलि दिने गरेका पाइन्छन् ।
तामाङ समाजमा उहिले उहिले दाहसंस्कारको बेलामा गोरु काटेर खुवाउने प्रचलन रहेको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी गोरु काटेर खुवाउने काम चाहिँ चेलीबेटीको हुन्थ्यो । त्यसबेला गोरुको मासु खुवाउने संस्कारलाई ‘मेच्छा’ भन्ने गरिन्थ्यो । ‘मेच्छा’ शब्द ‘मेस्या’ (गोरुको मासु)बाट बनेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा राज्यसत्ताले नै गोरु काट्न वर्जित गरेको थियो । त्यसपछि भने गोरुको सट्टा बाख्रा काटेर काम चलाउन थालेका देखिन्छन् । त्यसबेलादेखि ‘मेस्या’को सट्टा ‘म्हेस्सा’ वा ‘न्हेप्सा’ भन्ने गरिएका हुन् । यस्तै संस्कार हिन्दूमा पनि रहेको भन्ने कुरा माथि नै चर्चा गरिसकेको छ । गोरु काट्न पाउने बेलाको कुरा गर्ने हो भने ‘मुइडङ’ (राँगाको फिलासहितको कोशेली)को सट्टा ‘मेडङ’को प्रचलन थियो । गोरुको फिलासहितको कोशेलीलाई नै ‘मेडङ’ भनिएको हो ।
तामाङ समुदायलाई बौद्ध धर्मावलम्बी भन्ने गरिएको छ । यस समुदायमा बोनको अवशेष मात्रै बाँकी रहेको दावी गर्छन् । मानवशास्त्रीहरू भन्छन्, तामाङ भनेको बोन र बौद्धको सम्मिश्रण हो । अझै कतिले तर्क गर्छन्, तामाङले मान्ने बौद्धधर्ममा बोनको व्यापक प्रभाव रहेको छ । तामाङ समाजमा ”सोदेयल बोम्बोसे क्योन्बा ! शिमाहेन्दे लमसे थर्पेलिङरी पुइबा” भन्ने गर्दछन् । बोन र लामाको बीचमा सम्झौता भएको बताउँछन् । व्यवहारमा पनि यस्तै देखिएको छ । तामाङमा थर र रगतको कुरा आउने गर्दछन् । तिनैका आधारमा कुटुम्ब र भाइखलकको पहिचान गर्दछन् । आमा र हजूरआमासम्म पनि बार्छन् । आफ्नो थरको अलावा सहथरहरू पनि हुन्छन् । थर अनुसारको कुल हुन्छन् र मान्छन् ! कुल पूजा अर्थात देवाली दुर्इ प्रकारका हुन्छन् । बाहिरको ‘लस्होबा’का लागि तामाङ बोन भए हुन्छ तर न्हङ्ला वा तिङदो फो लको लागि भने आफ्नै थरको चाहिन्छ । बैशाखमा गर्ने स्हिवा म्हण्डलको लागि समेत आफ्नै थरको बोन चाहिन्छ । देउकुल वा पितृपूजाको बेलामा गैरतामाङ भाषा प्रयोग गर्दैनन् ।
हरेक थरको उत्पत्तिसम्बन्धी मिथ (किंवदन्ती) रहेका हुन्छन् । हरेकको आफ्नै कुल हुन्छन् । कुलको आफ्नै नाम हुन्छ । यिनीहरू कुल पूजा गर्दछन् । कुललाई बाख्री वा भाले बलि दिने गरेका पाइन्छन् । हिमाली भेगमा हुँदा भेँडाको बलि दिएका भन्ने कहानी गर्छन् । केही थरका भने गोरु बलि दिने प्रचलन रहेको छ । उदाहरणका लागि भन्ने हो भने, सिन्धुली मावरका थोगोरहरूलाई थरी लामा भन्ने गर्दछन् । उनीहरू उहिल्यैदेखि लामा काम गर्दै आएका विश्वास गर्छन् । तथापि उनीहरूकै कुल पूजाको बेला गोरु बलि दिनुपर्ने हुन्छ । राज्यले गोवधमाथि बन्देज लगाएदेखि अहिलेसम्म पनि उनीहरूले प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै गोरु बलि दिँदै आएका पाइन्छन् । कुललाई गोरु बलि दिनु भन्दा अघिल्लो दिनमै गोमांसको नरी (लामो सुकुटी) पानीमा डुबाएर राख्छन् । बलि दिने बेलामा त्यही मासुको टुक्रा ल्याएर रेट्छन् । रेट्दाखेरि पानी खस्छन् र त्यसैलाई रगत मान्छन् । यस क्षेत्रमा अहिले पनि ‘लमला (लामाको) झ्योहो’लाई मान्ने गरेका पाइन्छन् । त्यसलाई भाले बलि दिने प्रचलन कायम रहेको छ । थरी लामा भन्नेहरूले समेत लमला झ्योहोलाई बोम्बो लगेर भाले दिँदै आएका छन् ।
कुललाई गोरु बलि दिनेमा लामाखोर पनि हुन् । एक मिथ अनुसार सबैलाई थर र कुल बाँडिसकेपछि मात्रै लामाखोरका बाजे पुगेछन् । त्यसैले लङकोर थर दिएछन् र लङ अर्थात गोरु नै कुललाई बलि दिनु भन्ने व्यवस्था मिलाएछन् । जब राज्यसत्ताले गोवधमा रोक लगायो; तबदेखि उनीहरूका कुलपूजा अवरुद्ध प्रायः रहेको बताउँछन् । त्यसैले, उनीहरूका कुलपूजा गरेको प्रतापले गाउँको कुनै न कुनै गाईगोरु कुनै पनि व्यहोरावश मर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बनेको पाइन्छ । यदि मरेन भने पूजा सफल भएको मानिँदैन । अहिले कुलपूजा गरेकै आधारमा गाईगोरु मर्ने हुँदैन । त्यसैले कुलपूजा गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने गरिन्छन् । यो भनाई तेमाल क्षेत्रमा पाइएको हो ।
लामा (बौद्ध)मा पनि मानव हाडखोरको प्रयोग गरिएका पाइन्छन् । यस सम्बन्धमा ‘डाकिनी येसे छोग्याल’को जीवनीलाई हर्ेन सक्छौं । ”उचित तवरले राखिएको गोप्यतामा अभ्यास गर्दा चढाइएका वस्तुहरू, विधिवत र चढाइएका गोप्य वस्तुहरू- औषधीहरू, तोर्माहरू, कपाली, किल, बज्र, घण्टी, माला, अनि ध्यान गर्ने समयमा हातमा लिइने अन्य साङ्केतिक वस्तुहरू आदि । यिनीहरूको सम्बन्ध मण्डलका लागि विशेष वस्तु मसानघाटका आठ प्रकारका गहनाहरू, हाडका मालाहरू इत्यादि र त्योभन्दा उच्चस्तरको मन्त्रयान अभ्यासमा प्रयोग गरिने वस्तुहरू आदि । विशेष गरेर यसमा कपलीको डमरु, कपली र काङलिङ पर्दछन् ।” भन्ने व्यहोरा ‘डाकिनी येसे छोग्याल’ नामक ग्रन्थको पृष्ठ २१ मा नेपाली अनुवादमा अनुवादक मुकेश लामाज्यूले उल्लेख गर्नु भएको छ । बौद्ध लामा अभ्यासमा अवीर वा रातो रङको साथै तोर्माको प्रयोग प्रशस्त पाइन्छन् । ती दुर्इ रङ र तोर्मालाई बलिको प्रतीकात्मक रूपमा व्याख्या गरिएका पाइन्छन् ।
गुरु पद्मसंभवको जीवनीलाई हेर्ने हो भने उहाँले पनि साधनाको क्रममा लासको प्रयोग गर्नु भएको देखिन्छ । येस्से छोग्यालद्वारा लिखित भनिएको ‘गुरु पद्मसंभव’को जीवनीलाई अनुवादक मुकेश लामाज्यूले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु भएको छ । उक्त ग्रन्थको पृष्ठ ७ र ८ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ- ”उहाँले लासको कपडा खोलेर लगाउनुभयो र लाससँग भएको खानेकुरा नै खानुभयो र अचला नामक समाधिमा लीन् हुनुभयो । त्यसपछि खुशीसाथ मसान घाटमा बस्नुभयो । केही समयपछि त्यस क्षेत्रमा ठूलो अनिकाल पर्‍यो । धेरै जसो मानिसहरू खान नपाएर मरे । कैयौ लासहरू कपडा नैं नलगार्इकन र कुनै खानेकुराबिना नै मसानघाटमा फालिए । त्यसकारण राजकुमार पद्मबज्रले मानिसको छालाको लुगा लगाई लासहरू खानुभयो । त्यसप्रकार उहाँले त्यस मसानघाटका सबै मातृका (मामो) डाकिनीहरूलाई वशीभूत पार्नु भयो र योग साधनामा तल्लीन रहनुभयो ।”
सोही क्रममा अगाडि लेखिएको छ, ”त्यही समयमा उडि्डयनको ‘गाउसो’ भन्ने स्थानमा शक्रराज नाम गरेका एक दुष्ट अनि पापी राजा थिए । उनले आफ्ना सम्पूर्ण मानिसहरूलाई यस्ता कामहरू गर्न लगाउँथे, जसबाट उनीहरू तल्लो जुनीमा पुग्दथे । ती राजालाई आफ्नो वशमा पार्नबाहेक मानिसहरूको कल्याण गर्ने अन्य उपाय नभएको कुरा राजकुमारले सोच्नुभयो र आफ्नो कपाल एक सर्पले बाँधी, मानिसको छालाको लबेदा लगाई बाघको छालाको धोती बनाउनुभयो । हातमा ५ वटा फलामका तीर र एउटा धनुष लिएर राजकुमार त्यस राजाको नजिक जानुभयो । त्यसपछि सबै पुरुषहरूलाई मारेर तिनीहरूको मासु खानुभयो, तिनीहरूको रगत पिउनुभयो । आफू सामु आउने सबै स्त्रीहरूसँग उहाँले सम्पर्क गर्नुभयो । यसप्रकार सबैलाई आफ्नो वशमा पार्नु भएपछि योग र मुक्तिको तनगन अभ्यास गर्नुभयो । त्यसप्रकार उहाँलाई राक्षस शान्तरक्षित नामाकरण गरियो ।”
मांस भोज्य हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा बुद्धवचन त्रिपिटकको दोस्रो निकाय ग्रन्थ ”मज्झिमनिकाय”को पृष्ठ ३३७ मा अनुवादक तथा सम्पादक दुण्डबहादुर वज्राचार्यले उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । उक्त ग्रन्थमा जीवक-सुत्त (जीवकसूत्र)को १. त्रिकोटी-परिशुद्ध-मांस शीर्षक अन्तर्गत ” (१) देखेको (दिट्ठं), (२) सुनेको (सुतं) तथा (३) शङ्का लागेको (परिसङ्कितं) अर्थात् आफ्ना निमित्त प्राणी मारिरहेको देखेको, सुनेको र मनमा शङ्का लागेको” मांस (मासु) अभोज्य अर्थात् खान नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तैगरी ”(१) नदेखेको (अदिट्ठं), (२) नसुनेका (असुतं) तथा (३) शङ्का नलागेको (अपरिसङ्कितं)” चाहिँ भोज्य वा खान मिल्छ भनिएको छ । सोहीक्रममा ”मनुष्य, हात्ती, घोडा, कुकुर, सर्प, सिंह, चितुवा, भालु र तरक्षुका मासु अभोज्य हुने कुरा महाव.पृ. २३५: भेसज्जक्खन्धकंलाई उदृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ । एउटा जातक कथा अनुसार बुद्धले प्रवचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो । चउरको पर एक छेउमा एउटी कोरली (गाई) चर्दै थिइन् । दुर्इ जना भिक्षुहरूले ती कोरलीलाई देखे । एक जनाले चाहिँ त्यो कोरलीको मासु कत्ति मिठो हुन्छ होला भनेर सुनायो । त्यही विषयमा ती दुर्इ जनाले कुरा गर्दा-गर्दै अचानक उक्त कोरली ढलेर मरी । बुद्धले प्रवचनपछि उक्त कोरलीको मासु खाने इच्छा भएकाहरूले खानु भन्नुभएको थियो । त्यसक्रममा प्रश्न पनि उठेका थिए । बुद्धले, हाम्रै भिक्षुमध्ये दुर्इ जना साथीहरूले मासुको कुरा गरेको सुनेपछि उक्त कोरलीले देहग्याग गरेकी हुन् । तिनी कोरली मात्र नभएर निर्वाणको क्रममा रहेकी थिइन् । त्यसै हुनाले भिक्षुलाई मांस भोजन गराउनकै निमित्त निर्वाण लिएकी हुन् । अब र्इच्छा हुनेले त्यसको मासु खाँदा केही फरक पर्दैन भनेर भन्नु भएको भन्ने पनि पाइन्छ ।
यी उदाहरणहरूलाई हामीले कसरी लिने र बुझ्ने ? यसलाई सही अर्थमा बुझ्न नसकेमा के होला ? सही अर्थमा कसरी बुझ्न सकौंला ? यस सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले सामान्य जीविकोपार्जन वा जीवनयापन अनि विशेष साधनाको अवस्थामा फरक हुन्छ । यी दुर्इ अवस्थालाई नबुझिकन व्याख्या गर्दा गलत हुन्छ । त्यसैले हिन्दू, लामा र बोनमा हत्या र हिंसा तथा बलिको कुरा के छ भनेर बुझ्न तिनका सन्दर्भ र दर्शनको गहिरो अध्ययन बिना सम्भव छैन । यतिखेर बाहिरबाट हेरेर जान्ने बन्नका निमित्त मात्रै बलि ठिक वा बेठिक भनेर बहस गरिरहेका देखिन्छन् । त्यस्ता व्याख्याले अहिलेलाई केही हायहाय त प्राप्त गर्न सकिएला । भोलि नयाँ पुस्ताले खोजेको बेला उत्तर दिन सक्ने छैन । त्यसबेला आफ्नो नाम समाज बिगाराको रूपमा स्थापित हुन बेर लाग्ने छैन ।
अझै अन्य अर्थमा नलिने हो भने, बजारमा उठेका जिज्ञासा वा प्रश्नको उत्तर दिनै पर्छ । कतिले प्रश्न गरेका छन्, लामाले त त्रिरत्नको शरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने हो तर किन तम्बाको भूमिका खोसेर आफैँले सांसारिक जीवन (वैवाहिक सम्बन्ध) स्थापित गराउँदै हिँडिरहेका छन् ? लाङदर्माको हत्या गर्दाखेरि- बौद्धको करुणा कता गएको थियो ? बुद्धिजमसम्बन्धी प्रशस्त चलचित्रहरू पनि बनेका छन् । साउलिनको कुरा पनि उठाएका पाइन्छन् । बौद्धहरूले थेरावादमा लिप्त भएकै कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बङ्गालदेशबाट आफ्नो अस्तित्त्व समाप्त पारेको दृश्य हेर्नु परेको थियो । मुस्लिमको आक्रमणका कारण आफ्ना केन्द्रहरू ध्वस्त हुँदा, ज्यान जोगाएर भाग्नु सिवाय अरू केही गर्न सकेका थिएनन् । यहीनेर बौद्धले आफ्नो ज्यान वा प्राणको लागि अन्यको हत्या, हिंसा गर्नु गराउनु हुँदैन तर बुद्धधर्मको सुरक्षार्थ आक्रमणकारीसँग लड्नुलाई उचित मान्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको भए कसको के जान्थ्यो ? यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने बलिप्रथा वा हत्या हिंसालाई सहज र सही अर्थमा बुझ्न सकिने छ ।
५. सतिदेखि सतु र मासतीसम्मका इतिहास
‘सति’को बारेमा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । ‘सतु’ र ‘मासती’को बारेमा भने धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । ऐतिहासिक पक्षलाई हेर्ने हो भने ‘सति’ प्रथाको बारेमा प्रशस्तै उल्लेख गरिएका पाइन्छन् । यस सम्बन्धमा ज्ञानमणि नेपालज्यूले ‘नेपाल-भोटचीनसम्बन्धका केही साँस्कृतिक पक्ष’ नामक ग्रन्थमा उल्लेख गर्नु भएको छ । उक्त ग्रन्थमा ‘सति’ जस्तै महिलाको मृत्यु हुँदा पुरुष अनि छोराको मृत्युमा आमा ‘सति’ गएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी लाससँगै जलेका पुरुषलाई ‘सतु’ र आमालाई भने ‘मासती’ भन्ने गरेका कुरा समेत उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । ‘चीनमा अन्त्यक्रियापद्धति र सतीप्रथा’ शीर्षक अन्तर्गत प्रशस्त चर्चा गर्नु भएको छ । एउटा अंश यस्तो रहेको छ, ”कुवलयखानका पालामा चौधौं शताब्दीमा चीनको यात्रा गर्ने प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री मार्कोपोलोको भनाइ यस सम्बन्धमा यस प्रकारको छ- मङ्गोलबादशाह जहाँसुकै मरे पनि त्यहीँ ल्याएर गाड्ने चलन छ । लास लिएर जाँदा बाटामा जाने मानिस जो जति भेटिन्छन्; तिनलाई पनि मार्दछन् र बादशाहका लासका साथ पकडिएका मारिएका मानिस र घोडा पनि गाड्दछन् । गाडिएका यी मानिस र घोडाहरू सबै परलोकमा गएका बादशाहको टहल चाकरी गर्न पुग्दछन् भन्ने तिनीहरूको विश्वास छ । मानकुखांनको लास लाँदा बाटामा यसरी तीस हजार मानिस मारिएका थिए र उनको लाससँगै गाडिएका थिए भन्ने पनि उनको वर्णनमा उल्लेख गरिएको छ ।”
अगाडि लेखिएको छ, ”रसिद उद्दीनको भनाइअनुसार चंगेजखानको लास लैजाँदा पनि बाटामा धेरै मानिस मारिएका थिए, ती मारिएका मानिसका लासबाहेक अरू चालीस जना ठूला भलाका छोरी राम्रा सुन्दरी केटीहरू पनि बादशाहसँगै गाडिए । अरू असल-असल घोडाहरू पनि बादशाहका लासका चिहानसँगै गाडिएका थिए । अर्का यात्री इब्नबतुताले पनि यस विषयमा लेखेका छन् । उनी चीन पुगेको बेला लडाइँमा गएका बादशाह उहीँ मारिए । यो समाचार आउनेबित्तिकै शाहरभरि डंका फिजाइयो । शहर सजधजसँग सजाइयो । एक महीनासम्म नाच गान रङग रौस हुँदै रह्यो । त्यसपछि बादशाहको र उनका नोकर-चाकर भाइ-बन्धु नातेदारका समेत गरी जम्मा शयवटा जति लास ल्याइपुर्‍याइए । भूर्इं खनेर एक ठूलो घरजस्तो बनाइयो, विस्तरा बिछ्याइयो । बादशाहको लास त्यहाँ राखियो, साथमा चार नोकर्नी छ नोकरका लास पनि राखिए । बादशाहले चलाउने हातहतियार र खाने-पिने सुनका भाँडा पनि गाडिए । चारवटा घोडा सुइराले उनेर चिहानका बलिया कीलामा झुण्ड्याइए । बादशाहका १० जना नातेदारका लास थिए, तिनका लागि पनि प्रत्येकलाई छुट्टा-छुट्टै चिहान बनाइए र उनका हातहतियार भाँडावर्तन पनि गाडिए । चिहानमाथि तीन तीनवटा घोडा झुण्ड्याइए, अरूका चिहानमाथि एकएक घोडा झुण्ड्याइएका थिए ।”
नेपालमा पनि ”वि.सं. १७३६ पौषकृष्णनवमी बृहस्पतिवारका दिन राजा प्रताप मल्लका मठ्याहा छोरा भाकुतुको मृत्यु भयो । भाकुतुकी आमा र उनकी स्वास्नी (माधेजुकी छोरी) पनि उनीसँगै सोलामा जलेर सती भए ।” त्यस्तैगरी ”पाटनका राजा विश्वजित् मल्ललाई वि.सं. १८१७ मा जबर्जस्तीसँग दरबारमा पसेर जारले काटेर मार्‍यो । पुत्रशोकले व्याकुल बनेकी उनकी माता छोराकै चितामा चढेर ‘मासती’ बनी सँगै जलेर मरिन् ।” यस्ता ऐतिहासिक घटना वा संस्कारले बलिको झल्को दिने गरेको छ । यस्ता धेरै डरलाग्दो घटनाहरूका लागि उल्लेखित ग्रन्थको अध्ययन गर्नुहोला ।
नेपाली समाजमा लोग्नेको मृत्यु भएपछि श्रीमतीलाई सति जान बाध्य पार्थे । नमान्ने वा आगोको डाह सहन नसकेर भाग्नेलाई उठाएर पुनः चितामै हाल्ने वा मारेर जलाउने जस्ता हर्कत कायम रहेका देखिन्छन् । यस्तै कथाहरूमा आधारित ‘झोला’ कथासङ्ग्रह पनि एक हो । कृष्ण धराबासीद्वारा लिखित उक्त कथालाई चलचित्रको रूपमा निर्माण गरिसकेको छ । यी घटनाहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, उहिले नरबलि दिने प्रचलन थियो । राजामहाराजाको दाहसंस्कारको क्रममा अनेक बहानामा श्रीमती, रखौटी, राम्रा केटी मात्रै नभएर नोकरचाकर तथा आफन्तजनसमेत मारिन्थे । मृतक राजाको लागि साथी र जनता होस् भन्नाका खातिर त्यस्तो चलन चलाएका देखिन्छन् । त्यसैले सिधै पशुलाई जस्तै रेटेर बलि नदिएतापनि एक किसिमले बलिवेदीमा चढाएको भनेर भन्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको छ ।
आज त्यस्ता संस्कारहरू समाप्त भैसकेका छन् । यदाकदा सुन्न बाध्य हुँदै आएका पनि छौं । नेपालमा चन्द्रशमशेरको पालादेखि नै सत्रि्रथाको उन्मूलन भएको देखिन्छ । समयानुकूल परिवर्तन हुन्छ नै । त्यसलाई कसैले रोकेर वा दौडाएर सकिने कुरा होइन । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको बलिको पुनःभाष्य वा नयाँ परिभाषा वा नयाँ युग सुहाउँदो परिभाषा लगाउनु हो । एउटै परिभाषाले सधैँभरि काम चल्दैन । त्यसैले त कतिपय चिन्तकहरूले त परिभाषालाई नै हटाउने कुरा गरेका हुन् । भन्नखोजिएको यो हो कि- अब हामीले बलिलाई नयाँ युग सुहाउँदो मान्यता र दर्शन निर्माण गरी परिभाषित गर्न आवश्यक भएको छ । प्रतीकात्मक रूपमा दिने वा पूर्ण रूपमा रोक्ने भन्नेमा गहिरो छलफल आवश्यक देखिन्छ । बलिलाई पू्र्ण रूपमा समाप्त गर्ने हो भने मानिसलाई मांसाहारी बानीबाट छुटाउन अति जरुरी हुन्छ । अन्यथा यो असम्भव हुनेछ ।
संसार केही सङ्ख्यामा ‘भ्याम्पायर’हरू रहेका बताइन्छन् । तिनीहरू हामीजस्तै सामान्य देखिन्छन् । तथापि तिनीहरूलाई मानिसको रगत पिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ताका लागि रगत जम्मा गर्ने गरिएका भन्ने पनि देखिन्छन् । ती भ्याम्पायरले मानिसलाई मारेर रगत पिएको भन्ने देखिँदैन । तथापि मानव रगत नपिएसम्म उनीहरू बिमारी पर्ने तथा मानसिक रूपमा समस्याका फस्ने गरेका देखिन्छन् । गएको पालिदेखि गढीमाई मेलामा बलि दिन नपाउने भनेर आदेश जारी भएको देखिन्छ । यसअघि त्यहाँ असङ्ख्य हाँस, बोका र राँगाहरू मारिन्थे । बलिको शुरूमा मानव वा नरबलि दिने प्रचलन थियो । पछिल्लो समयमा पनि मानिसको दुर्इ आँखाका बीच, पाखुरा, तिघ्रा लगायतका अङ्गमा सियोले घोपेर रगत निकालेर चढाउने गरेको थियो । यसपालि दशैँ २०७२ को अवसर पारेर जनकपुरस्थित एक मन्दिरमा मात्रै १४ हजारभन्दा धेरै बोकाका बलि चढाइएको भन्ने समाचार आएको छ ।
नेपाली समाजकै कुरा गर्ने हो भने म्हेनङ तथा दशैँको नाममा अनेकाअनेक पशुपङ्क्षीका बलि दिँदै आएका छन् । अहिंसावादी, बौद्ध, तथा पुश अधिकारकर्मीहरूले बलिप्रथाको विरोध र सचेतना कार्यक्रमहरू गर्दै आएका देखिन्छन् । तथापि बलिप्रथामा खासै कमि आएको देखिँदैन । केही दिनअघि मात्रै राजधानीको स्वयम्भूमै एक किशोरीलाई बलिको लागि तयारी गर्दै गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको थियो । यसले सिङ्गो मानवसभ्यतालाई नै लाजमर्दो बनाएको छ । यतिखेर एउटा क्लासको याद आयो । कुनै एकजना गुरुले पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको तर्क थियो- ”बाघलाई हामी हिंस्रक भन्छौं । वास्तवमा बाघ हिंस्रक हुँदैन । त्यसको प्राकृतिक गुण नै मासु खानु हो । नखाइकन ऊ बाँच्न सक्तैन । बाँच्न पाउनु उसको पनि अधिकार हो । तथापि एकै पटकमा एउटा भन्दा बढी बाख्रा मार्‍यो भने मात्र त्यो बाघ हिंस्रक हुन्छ । एउटा मात्रै बाख्रा मारेर खान्छ भने त्यसलाई हिंस्रक भन्न मिल्दैन ।”
अझै पनि बलिप्रथालाई कायम राख्नुपर्छ भनेर भन्दिनौं । करिब ५८/५९ सालतिर हुनुपर्छ । एनिमल प्लानेटमा जस्तो लागेको छ, एउटा बाघले भिरालो स्थानमा शिकारलाई झम्टेको दृश्य देखाएको थियो । उक्त दृश्यमा बाघले शिकार प्राप्त गर्न सकेको थिएन । शिकार भागेको/उम्केको थियो । त्यसरी झम्टेको बेला बाघको अघिल्लो पञ्जाले टेकेको स्थानमा रहेका साना ढुङ्गाहरू उछिट्टिँदै थिए । एउटा ढुङ्गो अलि ठूलो थियो । उक्त ढुङ्गा लडेर जाँदै थियो तर बाघले आफ्नो पञ्जाको प्रयोग गर्दै उक्त ढुङ्गोलाई समातेर अड्याएको थियो । त्यो दृश्य देखेर म आश्चर्यमा परेको थिएँ । आज पनि बोम्बो र बलिका कुरा आउँदा उक्त दृश्य आँखामा घुम्न थाल्छ । कता-कता बोम्बो संस्कार र उक्त बाघका हर्कतमा समानता पाइरहेको हुन्छु । भन्छु; ”मासु छोड्न नसक्ने नै भए कम्तिमा पनि त्यो बाघ जत्तिको हुनु । फेरि पनि, नसक्ने भन्ने केही छैन; त्यसैले सकेसम्म मांसाहारी व्यवहारलाई बिस्तारै छोड्नु । शाकाहारी जीवन जिऔं । त्यसैले भ्रमको होइन करुणाभावको खेती गरौं । ढिलो नगरी बुद्धत्त्वको बाटोमा समाहित होऔं ।” मौलिक पहिचानको निमित्त ”तामाङ बुद्धिजम”लाई स्थापित गराऔं !!!
tweet तामाङ दिदीभाइ फाइनलमा
बौद्ध दर्शनमा राजनीतिक विचारहरू